Somaliya Oo Shaacisay Sababta Dhabta Ah Ee Ay U Joojisay Muxaadaradii Sheekh Umal - Jigjiga Online
HomeSomalidaSomaliya Oo Shaacisay Sababta Dhabta Ah Ee Ay U Joojisay Muxaadaradii Sheekh Umal
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay muxaaradada Sheekh umal in loo baajiyey codsi Sheekha dhankiisa ka yimid.
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta warmurtiyeedkeeda ay maanta oo Sabti ah oo ku beegan 23-ka November 2019, waxay ku billaawday iney iyadu arrimaha diinta iyo awqaafta au masuul uga tahay dalka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka JFS, qodobka 3aad faqradiisa 1aad.
Waxay sida oo kale warmurtiyeedka wasaarradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ay kaga hadashay arrima dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
Iney dhexdexaad u tahay dhammaan aragtiyada culimada soomaaliyeed ee kala duwan.
Mahadnaq ay u soo jeedisay Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo culimada la socotay gacanta ay ka geysteen gargaarka shacabka ku waxyeelloobay fatahaadaha ka dhacay qayba ka mid Soomaaliya.
Mahadnaq ay sheekha uga soo jeediyeen khubadda uu ka jeediyey masaajidka Isbahaysiga.
Aqbalaadda Sheekhu uu aqbalay codsiga shacabka ee ah inuu Muxaadaro u soo jeediyo.
Waxayna wasaaraddu nasiib darro ku tilmaantay: “in tashwiish lagu furay qabshada muxaadarada Sheekha uu cinwaankeedu ahaa ‘Asbaabaha keena musiibooyinka iyo Sida looga hortago’.”
Waxayna wasaaraddu sheegtay Sheekha isaga oo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaradda Awqqafta iyo Diintana ay ku waafqday soo jeedintiisa.
Waxayna wasaradda warmurtiyeedkeeda ku sheegtay Sheekhu inta uu jooga dalka Soomaaliya inuu qaban doono barnaamijyo wacyigelineed, barnaamijyadaasi oo ka bixi doona warbaahinta dalka.
Ugu dambeyn, wasaaradda waxay warmurtiyeedkeda ku soo afmeertay iney Skeh Maxamed Cabdi Umal ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon.
Marwalbana ay soo dhaweyneyso dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaarka u ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed oo xilligan baahida weyn loo qabo.
Dib u dhigidda Muxaadarada Sheekh Umal ee Muqdisho
Waxaa si lama filaan ah dib loogu dhigay muxaadaro uu Sheekh Maxamed Cabdi Umal ku qaban rabay magaalada Muqdisho, sababtuna kuma saabsana muranki Khamiistii hareeyay arrimha la xiriira muxaadaradaas.
Sababta rasmiga ah ee dib loogu dhigay muxaadaradaas oo uu cinwaankeedu ahaa (Waxyaabaha keena musiibooyinka, sida looga hortagi karo iyo sida xal loogu heli karo mark ay dhacaan) ayaa lagu sheegay inay tahay aaska maalinta jimcaha oo ku beegnaa 22-ka, November, 2019 magaalada Muqdisho loogu sameynaey Almaas Elman, oo Arbacadii geeriyootay.
Sheekha ayaana la sheegay inuu ku mashquulay Janaasada meydka haweeneydaas, kaasoo lagu sameeyay masaajidka Isbahays.
Maalinta Axadd ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bishan November ayaana lagu waday inay qabsoonto muxaadarada, sida uu BBC-da u sheegay Sheekh Umal qudhiisa.
Shekh Umal muxuu kaga jawaabay eedeymaha loo soo jeediyey?
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo BBC u warramay oo ka hadlayay arrintaas wuxuu yiri: “Anigu ma ogi wax dood ah oo ka jirta muxaadarada, in la iclaamiyay oo aan ku talagashanahay unbaan ogahay. Wadaadku waxaan u maleynayaa inuusan warba heynin, ma hurdo ayuu kasoo kacay?, afkaarta uu ka hadlayo haddey tahay middan qolada xagjirka ah ay qabaan, dadka kaliya ee la dagaallamay annagaa ahayn, billowgii ilaa dhammaadkii, oo halis badan u galay, naftooda khatar loo galiyay, culimadeenni baa lagu laayay sida la ogsoon yahay, marka wuxuu ka hadlayo ma garanin, malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira, hadduu nin aqoon diimeed leh yahay, adduunka hadda jirana uu la socdo, waxaan u maleynayaa sidaas inuusan u hadleen”.